Ogaanshaha bakteeriyada iyo noolaha
Qalabka dareeraha dareeraha ee ATP
Nalalka dila cayayaanka
Ogaanshaha saadaasha hawada
Rugta saadaasha hawada ee beeraha
Ogaanshaha jir ahaaneed
Falanqeeyaha dhirta dhirta
Qalabka dhirta chlorophyll
Baaraha aagga dhirta
Qalabka dhirta sawir qaadaha
Qalabka neefsashada dhirta
Warshadda socodka socodka dhirta
Ogaanshaha halabuurka ciidda
Baasiilaha ku shaqeeya batroolka
Xirmo sambal ciidda
Ciidda afar baare baare
Sawirro dhireed la qaadi karo ...
Wareegtada ATP ee la qaadan karo d ...
Mawjadaha ruxruxa jawiga i ...
FK-CSQ20 Xiinka Isku-xidhka ...
FK-CT20 Baaraha nafaqada ciida
Ciid: ammonium nitrogen, fosfooras la heli karo, potassium la heli karo, maaddo dabiici ah, alkali hydrolyzable nitrogen, nitrate nitrogen, wadarta nitrogen, wadarta fosfooraska, wadarta kalsiyamka, kalsiyum la heli karo, magnesium la heli karo, baaruud la heli karo, birta la heli karo, manganese la heli karo, boron la heli karo, zinc la heli karo , naxaas la heli karo, koloriin la heli karo, silikoon la heli karo, pH, cusbada ku jirta iyo biyaha;
Bacriminta: nitrogen, fosfooraska iyo macdanta ku jirta bacriminta fudud iyo bacriminta isku dhafan. Nitrogen, fosfooraska, potassium, humic acid, qiimaha pH, walxaha dabiiciga ah, kaalshiyamka, magnesium, baaruud, silikoon, bir, manganese, boron, zinc, copper iyo koloriin ku jirta bacriminta dabiiciga ah iyo bacriminta foliar (bacriminta bacriminta).
Warshad: N, P, K, CA, Mg, S, Si, Fe, Mn, B
Iyada oo la adeegsanayo qaab dhismeed isku dhafan iyo kaar SD ah oo la dhisay, qaybta ugu weyn waxay soo ururin kartaa xudduudo badan sida heerkulka, qoyaanka, cusbada, PH iyo wixii la mid ah carrada deegaanka ee la tijaabiyay waqtiga dhabta ah, waxayna ku soo dejin kartaa xog hal fure.
Falanqeeyaha dahaadhka dhirta la qaadan karo ee FK-G10
Waxaa si weyn loogu isticmaali karaa wax soo saarka beeraha iyo cilmi baarista sayniska. Si loo baaro ilaha iftiinka daarta, la cabbiro dhexda iftiinka geedka dhirta, lana derso xiriirka ka dhexeeya koritaanka dalagga, waxsoosaarka iyo tayada iyo ka faa'iideysiga iftiinka, aaladda waxaa loo isticmaalaa in lagu cabbiro laguna duubo shucaaca firfircoon ee sawirrada leh (PAR) ee kooxda 400nm-700nm. Unugga qiimaha la cabiray waa micromolar (μ molm2 / s) mitir laba jibbaaran · s.
Mashiinka sawir qaadaha ee la qaadan karo oo mitir ah FK-GH30
Qalabku wuxuu si toos ah u xisaabin karaa tilmaamayaasha sawir-qaadista sida heerka sawir-qaadista, heerka beddelidda, isku-darka isku-darka CO2, habdhaqanka caloosha, iwm. Dhirta iyadoo lagu cabbirayo xaddiga CO2 ee la nuugay (la sii daayay) caleemaha dhirta muddo cayiman gudahood isla markaana isla mar lagu cabbirayo heerkulka hawada. iyo huurka, heerkulka caleenka, xoojinta iftiinka iyo aagga caleenta CO2 Qalabku wuxuu leeyahay faa iidooyin aad u sarreeya oo xasaasiyad sare leh, jawaab deg deg ah, faragelin adag oo xoog leh, qalliin ku habboon, waxaana loo isticmaali karaa go'aaminta in-vivo iyo go'aan joogto ah. Sidaa darteed, waxaa si ballaadhan loogu adeegsadaa dhinacyo badan sida cilmiga dhirta, cilmiga dhirta dhirta, bay'ada deegaanka, cilmiga beeraha, iwm.
Noolaha qalabka cabbiraadda caleenta dhirta ee YMJ-G
Waa wax soo saar la soo saaray. Waa qalab la qaadan karo oo si fudud loo isticmaali karo kana shaqeyn kara duurka. Waxay qiyaasi kartaa aagga caleenta iyo xuduudaha la xiriira si sax ah, si dhakhso ah oo aan wax u baabi'in. Waxay kaloo cabbiri kartaa aagga caleenta dhirta la soo xulay iyo walxaha kale ee xaashida ah. Waxaa si weyn loogu adeegsadaa beeraha, saadaasha hawada, dhirta iyo waaxyaha kale.
Qalabku wuxuu si toos ah u cabbiri karaa dhererka, ballaca iyo aagga daabku leeyahay, wuxuuna isku dari karaa nidaamka meelaynta GPS, wuxuu ku dari karaa interface RS232, wuxuuna soo dejin karaa xogta cabbiraadda iyo dejinta macluumaadka kombiyuutarka isla markaa, taas oo ku habboon aqlabiyadda cilmi baareyaasha si ay u sii baaraandegaan xogta.
Nooca mitirka aagga dhirta nool YMJ-A
Waa qalab la qaadan karo oo ku habboon in la isticmaalo oo ka shaqeyn kara berrinka. Waxay cabbiri kartaa aagga caleenta iyo xuduudaha la xiriira ee caleemaha si sax ah, si dhakhso ah oo aan waxyeelo lahayn, sidoo kale waxay cabbiri kartaa aagga caleemaha la soo xulay iyo jajabyada kale. Waxaa si weyn loogu adeegsadaa beeraha, saadaasha hawada, dhirta iyo waaxyaha kale.
Qalabku wuxuu si toos ah u cabbiri karaa dhererka, ballaca iyo bedka daabkiisa, wuxuuna dhexgeli karaa nidaamka meelaynta GPS, oo wuxuu ku dari karaa isdhexgalka RS232. Waxay soo dejin kartaa xogta cabbiraadda iyo meeleynta macluumaadka kombuyuutarka isla waqtigaas, taas oo ku habboon inta badan cilmi-baarayaashu inay sii wadaan falanqaynta xogta.
YMJ-B qalabka wax lagu baaro ee la qaadan karo
Waa qalab la qaadan karo oo si fudud loo isticmaali karo kana shaqeyn kara duurka. Waxay qiyaasi kartaa aagga caleenta iyo xuduudaha la xiriira si sax ah, si dhakhso ah oo aan wax u baabi'in. Waxay kaloo cabbiri kartaa aagga caleenta dhirta la soo xulay iyo walxaha kale ee xaashida ah. Waxaa si weyn loogu adeegsadaa beeraha, saadaasha hawada, dhirta iyo waaxyaha kale.
Qalabka waxaa loo isticmaali karaa in lagu qiyaaso isla markiiba cabirka maadada chlorophyll (halbeegga SPAD) ama shahaadada cagaaran, maadada nitrogen, qoyaanka caleen, heerkulka caleenta dhirta si loo fahmo baahida dhabta ah ee nitro ee dhirta iyo nitro la’aanta carrada ama haddii bacriminta nitrogen ee xad dhaafka ah ay leedahay ayaa lagu dabaqay. Intaa waxaa dheer, qalabkan waxaa loo isticmaali karaa in lagu kordhiyo heerka isticmaalka ee bacriminta nitrogen iyo ilaalinta deegaanka. Waxaa si weyn u isticmaali kara machadyada cilmi baarista iyo cilmiga sayniska ee la xiriira beeraha iyo dhirta si loo barto tilmaamayaasha cilmiga jir ahaaneed iyo hagida wax soo saarka beeraha
FK-CSQ20 Ultrasonic saldhigga cimilada isku dhafan
Waxaa loo isticmaali karaa dhinacyo badan, sida kormeerka saadaasha hawada, la socodka cimilada iyo dhirta, la socodka cimilada magaalooyinka, bey'ada deegaanka iyo la socoshada musiibada, waxayna si xasiloon uga shaqeyn kartaa jawiga qalafsan (- 40 ℃ - 80 ℃). Waxay la socon kartaa noocyo kala duwan oo ah arrimaha cimilada saadaasha hawada isla markaana u habeyn kartaa cunsurrada kale ee cabbiraadda iyadoo loo eegayo baahida isticmaale.
FK-Q600 Hand waxay qabatay caqli-baare deegaanka jawiga cilmiga deegaanka
Gacan-ku-hayaha gacan-qabashada deegaanka Agrometeorological waa saldhig dhul-beereedka microclimate oo si gaar ah loogu talagalay deegaanka yar-yar ee dhul-beereedka iyo dhul-daaqsimeedka, kaas oo kormeera carrada, qoyaanka iyo xuduudaha kale ee deegaanka ee sida dhow ula xiriira koritaanka dhirta iyo dalagyada. Waxay badanaa eegtaa 13 walxaha saadaasha hawada ee xuduudaha deegaanka ee laxiriira beeraha, sida heerkulka carrada, qoyaanka carrada, isdhaafsiga carrada, pH carrada, milixda ciidda, heerkulka hawada, huurka hawada, xoojinta iftiinka, kaarboon dioxide fiirsashada, shucaaca waxtarka leh ee sawirada leh, jihada dabaysha, roobka, iwm, siinta taageero wanaagsan cilmi baarista cilmiga beeraha, wax soo saarka beeraha, iwm.
Feejignaanta isdabajoogga nalka sunta cayayaanka FK-S10
Nalalka dilka cayayaanka soo noqnoqda laambad dilida (xakamaynta iftiinka, xakamaynta roobka, xakamaynta waqtiga) nooca
Otomaatiik shidan nalka fiidkii, nalku si toos ah ayuu u daminayaa maalintii, nalkuna si otomaatig ah ayuu u daminayaa maalmaha roobka
Dhamaan cimilada, roobka, hillaaca, heerkulka sare, daxalka
Ka hortag otomaatik ah maalmaha roobka ★ dilalka baahsan ee ballaadhan ★ xaddiga cayayaanka oo tiro badan
Nalalka dila cayayaanka waxaa ku qalabeysan tuubbo ka soo baxaysa hillaac difaaca ah, cimilada danabkuna ma waxyeeleyneyso jirka nalka.
Haddii korontada la shido inta lagu jiro maalinta, laambada dila cayayaanka ayaa si otomaatig ah u damin doonta 5 ilbidhiqsi kadib. Tani waa ifafaale caadi ah, badanaa sababtuna tahay iftiinka ku-dhisan iftiinka xakamaynta iftiinka
Laydhka xasaasiga ah ee sunta cayayaanka loo isticmaalo ee FK-S20
Qalabka unugyada qorraxda
1. 40W module cell
2. Adeegsiga moduleka qoraxda Suntech
3. Waxqabadka dahaadhka ≥ 100 Ω
4. Dabeysha dabaysha 60m / S
5. Xagasha rakibidda waa 40 darajo
6. Awoodda wax soo saarku waa inaysan ka yaraan 90% 12 sano gudahood, waana inaysan ka yaraan 80% 13 ilaa 25 sano. Heerkulka jawiga shaqada caadiga ah waa inta udhaxeysa - 40 ℃ iyo 85 ℃, wayna iska caabin kartaa saameynta roob dhagaxleyda dhexroorkeedu ka badan yahay 25 mm xawaaraha ≤ 23 mitir ilbiriqsi kasta. Tijaabada dabaysha ≤ 2400pa
Shiinaha Shandong chuanyunjie Instrument Co., Ltd. waa shirkad tiknoolajiyad sare leh oo ay ka go'an tahay cilmi baarista iyo horumarinta falanqeeyaha daaqada dhirta, baaritaanka dhirta chlorophyll ...
429, Dhismaha 67, 14278 Health East Street, Degmada Kuiwen, Magaalada Weifang, Gobolka Shandong